WhatsApp Plus, ilay fampiharana manafina virus mampidi-doza | Vaovao momba ny gadget
Mazava ho azy fa mihoatra ny iray amin'ireo nanatrika no nahita ity fampiharana WhatsApp Plus ity tamin'ny resadresaky ny WhatsApp tenany na ireo fampiharana fandefasan-kafatra hafa toa ny Telegram, sns. Toa izany malware mahery vaika miseho eo ambanin'ny heverina fa fandefasana hafatra izay mitazona ny angon-drak'ilay mpampiasa Ary mitandrema, afaka miditra amin'izy ireo amin'ny fomba tsotra ianao satria manome alalana anao ny mpampiasa.
Amin'izany no hiresahantsika ny angona rehetra amin'ny finday avo lenta toy ny fifandraisana, hafatra ary ireo mora tohina indrindra: el isan'ny carte de crédit na antsipirian'ny banky. Araka ny voalaza Malwarebytes, mivoaka ny otrik'aretina noho ity fampiharana ity
WhatsApp Plus, aza manakaiky azy!
Amin'ny ankapobeny, ity fampiharana ity dia tsy misy amin'ny fivarotana fangatahana ofisialy, na amin'ny Google Play store na amin'ny App Store, noho izany dia zaraina amin'ny tambajotra sosialy na ireo fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny alàlan'ny rohy mivantana. Raha vantany vao eo amin'ny tranonkala isika mamela antsika misintona ny fampiharana ary miaraka amin'ny fialan-tsiny amin'ny fanomezana vaovao mahavariana antsika eo alohan'ny fampiharana teratany, dia natao tamin'ny fampahalalana rehetra ananan'ny finday avo lenta noho ny malware nametraka anay.
Fake #Whatsapp afaka mangalatra info amin'ny anao # telefaona | #Malwarebytes Lab https://t.co/vN7ghrubvK #mobile #technology #cybersecurity #infosec #spam pic.twitter.com/oDCeaTEfSv
- Malwarebytes (@Malwarebytes) 3 Aprily 2018
Toa misy mpampiasa sasany mety lavo mora foana amin'ity famitahana ity ary noho izany ny azy Malwarebytes Efa nifandray tamin'ny WhatsApp izy ary mamerina ny famitahana amin'ny tambajotra sosialy rehetra. Zava-dehibe ny fahalalana izany WhatsApp dia manana fampiharana ofisialy iray fotsiny ary ity dia antsoina hoe WhatsApp, tsy misy zavatra hafa, noho izany ampahafantaro ny olom-pantatrao momba ity vaovao ity ary ambonin'izany rehetra izany aza miditra amin'ny vela-pandrika amin'ity karazany ity Ao amin'ny Google Play Store sy ny App Store, ny fampiharana ofisialy dia fantatra amin'ny isan'ny fisintomana ananany, ny ambiny dia tsara kokoa ny manao raha tsy fantatra ny fiaviany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » WhatsApp Plus, ilay fampiharana manafina virus mampidi-doza
Izy ireo dia mahavita mandrefy tsara ny asan'ny qubits 20 voafandrika, firaketana an-tsoratra amin'ny computing kuantum